I-Xiaomi Mi A1 iyindlala kepha isivele ithola i-Android 8.0 Oreo | Izindaba zamagajethi
Kubukeka kuxaka nokuthi idivaysi okunzima ukuyithola isivele isilungiselele noma isivele ithola isibuyekezo se- Uhlelo lokusebenza lwe-Android 8.0 Oreo. Kulokhu, abanikazi benhlanhla yedivayisi entsha kusuka enkampanini yaseChina bangaqala ukulanda inguqulo yakamuva yohlelo lokusebenza lweGoogle.
Into enhle ngokuba ne-stock Android Lokhu yikho kanye, ukuthi uma nje uhlobo olusha lohlelo selutholakala aluthathi izinsuku eziningi kakhulu ngaphambi kokuthi abasebenzisi bamadivayisi abo baqale ukuluthola. Icala leXiaomi Mi A1 alihlukile futhi selivele liqala ukubuyekezwa ngokusho kwabanye abasebenzisi.
Kulokhu kuyinguqulo yokuqala ye-beta ye-Android O ethunyelwa kubasebenzisi balezi zikhumulo zeXiaomi, kepha lokhu kusho ukuthi izindaba esizibonile kule nguqulo yakamuva yohlelo zizotholakalela lezi zinhlobo zeXiaomi.
Okungaphezulu kancane kwe-1GB yesikhala yilokho okuqhamuka le nguqulo yokuqala ye-beta I-GSM Arena futhi lokho ngokusobala kuzoba injabulo yabasebenzisi abaningi nethemba lokuvuselelwa ngokusemthethweni okusemthethweni kwabanye. Futhi ngukuthi izinhlobo ze-beta azifinyeleli kubo bonke abasebenzisi, kepha uma sezethuliwe isikhathi esisithathayo ukuyethula ngokusemthethweni sincane uma konke kulungile.
Sethemba ukuthi inguqulo esemthethweni ifika ngaphambi kokuphela kwalo nyaka 2017 futhi kuyinto le nkampani uqobo eyayixwayisa kudala. Sizolinda ukubona ukuthi kwenzekani ngaphambi kokuphela kwalo nyaka nokuthi ngabe kuyiqiniso yini ukuthi bazofika ngesikhathi sokuyisebenzisa ku-Xiaomi Android One yokuqala.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » I-Xiaomi Mi A1 iyindlala kepha isivele iqala ukuthola i-Android 8.0 Oreo
Amahedfoni amahle ka-2017